စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နွေဦး ပြန်လာ Pneumatic Actuator > စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator
AOX-P ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuaသို့r ရှိ မြင့်သော အရည်အသွေး နှင့် ရှည်လျားသော ဘဝဖြစ်စဥ် သို့ တှေ့ဆုံ အဆိုပါ အခင်အရှင် auသို့mation market.AOX-P ကို ကို စီးရီး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuaသို့r တှေ့ဆုံs အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ stနှင့်ards နှင့် ဖြစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက် ၏ မြင့်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှု နှင့် ရှည်လျားသော ဝန်ဆောင်မှု အသက် - ကြိုးစားနေ သို့ minimize ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်များ။ AOX အကောင်အထည်ဖေါ် အာမခံချက် လုံခွုံသော နှင့် စိတ်ချရသော ဝန်ဆောင်မှုs အောက် အမျိုးမျိုးသော အစွန်းရောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခွအေန။
တစ်ခု universal drive ကိုရိုးတံများအတွက်တီထွင်မှုနှင့်မူပိုင်ခွင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
Air ကိုပေးဝေရေးဖိအား: နှစ်ချက်သရုပ်ဆောင်: 2-8Bar; နွေပြန်လာ: 2-8Bar
ချောဆီအရည်ကြည်: ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအခွအေနေအရ, ချောဆီကို accrete မဟုတ်လိုအပ်တယ်လို့
အမြင့်ဆုံးဖိအား: အဆိုပါအများဆုံး input ကိုဖိအား 8 ဘားဖြစ်ပါသည်
â drive ကိုရိုးတံများအတွက်သင့်လျော်သောအမျိုးမျိုး Square ကိုလျှော့ချ¢
¢ bracket â
¢ကန့်သတ် switch ကိုသေတ္တာများâ
¢ Proximity switches များâ
အဆိုပါနှစ်ဦးကိုတစ်ဦးတည်းသောညှိ screw နှစ်ခုထားပြီးအဆို့ရှင်များပေါ်တွင် install ထားပြီးဖြစ်သော AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ယင်းအဆို့ရှင်အဖွင့်များ၏တည်နေရာများညှိနှိုင်းမှုစေနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့တိကျမှန်ကန်ပိတ်နိုင်၏ဘေးထွက်မျက်နှာပြင်မှာ။
AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator များအတွက် 2. Indicator သည်။
ဘက်စုံသုံးတည်နေရာညွှန်ပြချက်, လယ်ပြင်၌ VDI / VDE3845ã NAMUR မှညီမြင်နိုင်ညွှန်ပြချက်များနှင့်စံ socket installed အပေါင်းတို့နှင့်အတူဆက်စပ်ပစ္စည်းတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
3. ထိပ်တန်း / ခြမ်း mounting စံ။
အဆိုပါလေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး interface ကို NUMAR စံနှင့်အညီတည်ဆောက်ထားသည်။ အဆိုပါ interface ကိုရန် NUMAR solenoid အဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
4. ကျယ်ပြန့်တဲ့ operating အပူချိန်အကွာအဝေး, အနိမ့်ပွတ်တိုက်မှုနှင့်မြင့်မားသောသံသရာဘဝပေးအရည်အသွေးမြင့်ဝက်ဝံနှင့်ဖျံ Selected ။
အဆိုပါ actuator ၏ပုံစံကိုရွေးချယ်ရေး
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်အခြေအနေများအောက်တွင် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator များအတွက်အကြံပြုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် 30-50% ဖြစ်ပါသည်
အဆို့ရှင် = 80N.m ခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့် torque
အဆိုပါ torque ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအချက် (1 + 30%) = 104N.m စဉ်းစားပါ
Air ကိုထောက်ပံ့ရေး = 5Bar
နွေဦးပြန်လာactuatorâ s ကို output ကို၏ပုံပြင်အရ,
SC00300 ၏ output ကို torque ဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ရှာတွေ့:
Air ကိုလေဖြတ်0Â° = 172N.m
Air ကိုလေဖြတ်90Â° = 112N.m
နွေဦးလေဖြတ်90Â° = 165N.m
နွေဦးလေဖြတ်0Â° = 105N.m
လူအားလုံးတို့သည် output ကိုလိမ်အားကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုကြီးမားသည်။
ပွနျလညျထူထောငျစဉ်အတွင်းနွေဦးပြန်လာ actuators '' output ကိုလိမ်အားဆိပ်ကမ်း B.On ထံမှ inputing ဝေဟင်ဆန့်ကျင်ကြောင့်ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ, ကစမ်း၏ပွနျလညျထူထောငျကူညီပေးပါမည်။
1. ကျနော်တို့အနှစ် 20 ကျော်အဘို့ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 1997 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့, ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းနှင့် AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ၏ထုတ်လုပ် R & D ကိုအတွက်အထူးပြုနေကြသည်။
2. စီ relay ကိုအဘို့အသုတ်ကုဒ်ဖူးကောင်းတစ်ဦး traceability ရှိထားသည်။
3. ကြှနျုပျတို့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator များအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပစ္စည်းကိုရွေးချယ်ပါပေးသွင်းခြင်းနှင့်ကုန်ကြမ်းmaterialsï¼များအတွက်တင်းကျပ်သောစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အရှိသည်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator ။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏ AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator သို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရနိုင်မလား?
မေး: AOX-P ကိုစီးရီးစက်မှုဇုန်နွေဦးပြန်လာ pneumatic actuator မှာဘယ်လိုနေသလဲ?
ဖြေ Peas အီးမေးလ်ဖွငျ့ကြှနျုပျတို့ကိုသင်၏ဝယ်ယူမှုအလို့ငှာပေးပို့, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့သည်သင်တို့၏ request.We အောက်မှာသင်ငွေလွှဲစာတမ်းတန်ဖိုးငွေတောင်းခံလွှာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်သင် PI ပေးပို့ခြင်းမပြုမီသင့်ရဲ့အမိန့်အဘို့အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသိကျွမ်းရန်လိုအပ်သည်။
1) ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်ပမာဏ, Specfcaton (Size ကို, ပစ္စည်း, နည်းပညာတက္ကသိုလ်လိုအပ်ပါကနှင့် Pack လိုအပ်ချက်များကိုစသည်တို့)
2) Delivery အချိန်လိုအပ်
3) သင်္ဘောတင်သတင်းအချက်အလက်ကုမ္ပဏီအမည်, Street, လိပ်စာ, ဖုန်းနံပါတ် & ဖက်စ်နံပါတ်, Destination ဆိပ်ကမ်း
မဆိုတရုတ်နိုင်ငံရှိမယ့်လျှင် 4) အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို Forwarders ။
hot Tags:: စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်
သေးငယ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumatic rotary actuator
မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic rotary actuator
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ နွေဦး ပြန်လာ pneumatic rotary actuator
သေးငယ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator
မြင့်သော အရှိန် နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator
ကျစ်လစ်သော နွေဦး ပြန်လာ pneumatic actuator